Daily Khabar Np
सबैको ज्यान उस्तै हैन रकठै बरी कतिपिडा भयो होला मनमा माया हुनेले मात्र कमेन्ट गर्नुहोला !!
संसारमा कहिलेकाही एकदमै अचम्म लाग्दा घटना समेत हुने गरेका छन ! गोरखा नगरपालिका–९ मा रहेको शिखरडाँडामा निर्माणाधिन आपतकालिन पानी पोखरीमा डुवेर १३ वटा बाँदरको मृ*त्यु भएको जनाइएको छ । आपतकालिन अबस्थाका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै वडा भित्र निर्माण भईरहेको पोखरीमा डु*वेर मंगलबार बाँदरको मु*त्यु भएको वडाध्यक्ष कुल बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । गोरखा नगरपालिकाको दमकलमा पानी भर्नका लागि भन्दै ‘एक वडा, एक आपतकालिन पानी पोखरी’ निर्माणको अबधारणा अन्र्तगत शिखरडाँडामा पानी पोखरी निर्माणको काम भईरहेको छ । निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेको पोखरीमा केही दिन अघि परेको बर्षाका कारण करिब १ मिटर पानी जमेको रहेछ, त्यहि जमेको पोखरीमा पानी खान जाँदा बाँदर डुवेर म*रेका रहेछन् ।’ उहाँले भन्नुभयो
यो पनि समाचार: आज हामी एक यस्तो चियाको बारेमा जानौं कि, जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै फाइदाजनक छ र यसले हामीलाई ५० भन्दा बढी रोगबाट समेत बचाउन पनि सहयोग गर्नेछ। प्रतिदिन हामी जुन दिन चर्याको पालन गर्छौ जहाँ विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया अन्य कारणले एक यस्तो बिमारीको शिकार पनि हुन सक्छौं जसको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी हुँदैन।
अब हामी यस्ता बिमारीको बारेमा कसरी बच्न सक्छौं त यसको बारेमा जानकारी राखौं ,यो चिया तैयार गर्न चाहिने सामानहरु- पानी– ५०० मिलिलिटर, दूध– आधा कप, इलाइची–१ देखि २ वटा, हर्दी– १–६ चम्चा, दालचीनी–आधा चम्चा, अदुवा–आधा चम्चा, मह–स्वादको अनुसार,
यसको लागि हामीले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्न जरूरी छ। यो चियाले न केवल रुघा, खोकी, उल्टी जस्ता साना समस्यालाई हल गर्छ बल्की क्यान्सर जस्तो ठूलो समस्याबाट पनि यसले बचाउँछ। यो बनाउनको लागि हामी हाम्रै भान्छा कोठामा पाइने केही चिजलाई प्रयोग गर्न सक्छौं !
यो पनि पढ्नु होस्
अहिले साउन महिना चलिरहेको छ। साउन महिनामा भगवान शिवको विशेष कृपा प्राप्त गर्नको लागि भोलेनाथको पूजा-आराधना गरिन्छ। साउनको सोमबार व्रत बस्दा कन्याले मनचाह वर प्राप्त गर्छन् भन्ने व् विश्वास रहेको छ।
त्यस्तै, भगवान शिवको पूजा गर्नाले स्वास्थ्य तथा आरोग्यको वरदान प्राप्त हुन्छ। साउन महिनामा व्रत बस्ने मानिसले केहि विशेष नियमको पालना गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईं पनि साउनमा व्रत राख्न चाहनुहुन्छ भने यी नियमहरु पालना गर्नुहोस्। यदि तपाईं साउनको उपवास राख्दै हुनुहुन्छ भने बिहान उठेर नुहाउनुहोस् र नियम अनुसार पूजा गर्नुहोस्।
धर्मशास्त्रका अनुसार भगवान शिवको पूजा गर्दा बेसार प्रयोग गर्नु हुँदैन। भगवान शिवको पूजामा भांग, धतुरो, बेलपत्र, सेतो फूल, मह, फलफूल आदि अर्पण गर्न सकिन्छ। साउनको महिनामा मासु तथा मादक पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन। यदि तपाईं व्रत राख्न चाहनुहुन्छ भने भुलेर पनि यी चीजको सेवन गर्नु हुँदैन।
यसो गर्नाले भगवान शिव रुष्ट हुन्छन्। साउन महिनामा सात्विक भोजन मात्र सेवन गर्नुपर्छ। यस अवधिमा मुला, भान्टा, लसुन,प्याज जस्ता चीजको सेवन गर्नु हुँदैन। साउनको व्रत राख्ने मानिसले कालो कपडा धारण गर्नु हुँदैन। धर्मशास्त्रका अनुसार उपवासको बेला कालो लुगा लगाउँदा नकारात्मक उर्जा आउँछ।
विश्वास अनुसार उपवास राख्दा हरेक नियमहरुको पालना गर्नुपर्छ। यस समयमा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु हुँदैन। धार्मिक पुराण अनुसार उपवासको समयमा दिनमा सुत्न हुँदैन। यसको सट्टा तपाई भगवान शिवको भजन-कीर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार महिलाहरुले शिवलिंग छुनु हुँदैन।
शिवलिंगको स्पर्श गर्नाले माता पार्वती रुष्ट हुन्छिन् भन्ने विश्वास रहिआएको छ। त्यसकारण महिलाले शिवलिंगलाई छुनु हुँदैन। यसको मतलब यो होइन कि महिलाहरू शिवलिंगको पूजा गर्न सक्दैनन्। साउन महिनामा व्रत राख्ने मानिस सधैं सफा सुग्गर भएर बस्नु पर्छ।
उपवासको समयमा सफा लुगा लगाउनुहोस्। साथ, यो समयमा कपाल पनि काट्नु हुँदैन। यदि तपाईं साउनको उपवास राख्दा शिव कावच वा शिव चालिसाको पाठ गर्दै हुनुहुन्छ भने, उक्त समयमा कुनै पनि दोस्रो व्यक्तिसँग कुरा नगर्नुहोस्।
२०७८ श्रावण ३१, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 241 Views
कक्षा कोठा भित्रै शिक्ष’क र छात्रा यस्तो ह’र्कत गर्दै गरेको अवस्था’मा भेटीए ! हेर्नुस्…
विदेश’जान परेकोले इमर्जे’न्सी बाइक बिक्रीमा,किन्न इ’च्छुक ले तल दिएको नम्बारमा सम्पर्क गर्नु’होला…
भारतिय ह्याक’रले नेपाली दुई नायि’काको नक्कली पोर्न भिडियो सार्बज’निक गरेका छन् ( भिडियो )…
१.	सात कक्षामा पढ्ने किशो’रीले ब च्चा ज ‘न्माए पछी, बच्चाको बाबुको बारेमा सो’ध्दा किशोरीले दिएको जवाफले परिवार नै तिन छक्क परे…
२.	रक्षक नै भक्षक : सनकको भरमा डीएसपीद्वारा युवामाथि निर्घात कुटपीट , पसल बन्द गराउँदै हिडेको’ प्र’हरीको भिडियो खिचेपछि ती युवामाथि प्रह’रीले कुटपिट भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जा’लमा भाइरल…
३.	दुःख’को खबर,बस भीरबाट खस्दा, चालक सहित ४० जना’को मृ’त्यु २० जना घाइते(पुरा भिडियो)…
४.	स्कु’ल खुले लगतै यो के देख्नु पर्यो फेरि बाहि’रियो टिचर र बि’ध्यार्थि को ।(भिडियो सहित)
५.	त्यसप’छि ३ जना किशो’रले आफ्नै साथीलाई पालैपालै…
६.	चिता;मा जलाउन ठिक्क पारि’एको शवबाट आयो ‘ॐ ॐ’को आवाज, अनि श्वास फेर्दै उठ्यो लास…
७.	जंगल’मा बोलाएर जबर*जस्ती सिन्दुर हाल्न खोज्दा पर्यो हा*नाहान केटी;लाई गर्यो ब्ल्याक’मेल (भिडियो सहित हे*’र्नुहोस )…
८.	श्रीमा’नको बाँ’या तिर किन सुत्छिन श्रीम;ती ? जानी राखौ…
९.	हरेक पुरुषले एक पट’क पढ्नै पर्ने ! आ’र्काइभ अफ इन्टरनल मेडिसिन’को शोधले भन्छ, तपाईंको मोटोपनले पनि वी’ र्यको स्तर घटाउँ’छ…
मोरङ – सात ज’नाको ग्याङ्ग ले एक युव’कको निर्मल हत्या…
मलाई बचाउ’नुहोस् म डक्टर बनेर तपा’इँको सेवा गर्ने छु’ १४ वर्षिय एलिशा थापा…
स्कु’ल खुले लगतै यो के देख्नु पर्यो फेरि बाहि’रियो टिचर र बि’ध्यार्थि को ।(भिडियो सहित)